UWarren Buffett uncoma ukuhlala kukaTim Cook kwinqanaba lika-Apple ngenkumbulo zikaSteve Jobs | Ndisuka mac
UWarren Buffett uncoma ubunkokheli bukaTim Cook buka-Apple ngenkumbulo zikaSteve Jobs
Uthathwa njengomnye wabatyali mali abakhulu emhlabeni, Ukongeza ekubeni ngumnini zabelo omkhulu kunye noSihlalo kunye ne-CEO yeBerkshire Hathaway, uWarren Buffett uncome uTim Cook ngobunkokheli bakhe kwiApple. Uninzi lwethu lucinga ngokufanayo ne-tycoon, kodwa ayinalo ixabiso elifanayo ukuba ndiyatsho ngokungathi kuthethwa ngumntu onemvelaphi anayo umtyali mali. UWarren Buffet uncome uTim Cook njenge "Umphathi omangalisayo" Kwaye ikwenzile oko kwintlanganiso yonyaka yabanini zabelo eBerkshire Hathaway.
UWarren Buffet uncome uTim Cook "njengomphathi omangalisayo" eApple. Wambiza: «omnye wabaphathi abalungileyo kwihlabathi »Yonke le nto yenziwe ngexesha lentlanganiso yonyaka yabanini zabelo eBerkshire Hathaway.Ukuphendula imibuzo yabanini zabelo, enye yazo yayikukuba kutheni inkampani yotyalo-mali ithengise ezinye izabelo kwi-Apple nangona ithathwa njenge- «jewel yesine» yenkampani. UBuffett uthathe ithuba lokuvuyisana noApple njengenkampani, kunye noCook njengenkokeli yabo.
Yinkampani engaqhelekanga kwaye inomphathi omangalisayo. UTim Cook wayejongelwe phantsi okwethutyana. Ungomnye wabaphathi abalungileyo kwihlabathi. Kwaye ndibone abaphathi abaninzi. Kwaye unayo imveliso ethandwa ngabantu. Ineqela labantu elihlanganisiweyo, kwaye bafumana ukoneliseka ngama-99%. Lishishini elingaqhelekanga. Sibona abaphathi abaninzi abavela kumashishini amaninzi, kwaye ujonge ii-greats ezimbini kwiziphelo zombini apha.
Ukuthelekisa ii-CEO ze-Apple ezimbini. Le yangoku neyangaphambili. Ucacisile kwaye wayefuna ukuyenza icace into yokuba uTim Cook kunye noSteve Jobs babengoosomashishini abakhulu kodwa baneempawu ezahlukeneyo kunye namandla omnye komnye:
UCheka akakwazanga ukwenza into ngokucacileyo eyenziwa nguSteve Jobs ngendalo. Kodwa USteve Jobs akakwazanga, andicingi, wenze okwenziwe nguTim Cook ngeendlela ezininzi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UWarren Buffett uncoma ubunkokheli bukaTim Cook buka-Apple ngenkumbulo zikaSteve Jobs
Ngokobungqina beMidlalo ye-Epic, iApple inenzuzo engama-78% kwiVenkile yayo yeApp
IFixit ityhila ngaphakathi kwii-AirTags